auteur jona 16, 2015 Commentaires fermés
Ny antokon-draharahan’ny fahasalamam-bahoaka na ny BMH dia manana sampan-draharaha telo(3) izay ahitana ny : Service eau hygiène; assainissement ; sampan-draharaha BMH;Service médicaux sanitaires Ny Service Hygiène dia miandraikitra ny fanentanana ny mponina amin’ny fanajana
auteur jona 13, 2014 Commentaires fermés
Maro ny asa sahanin’ny polisy monisipaly eto amin’ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Ny fizahana ifotony ny sakana rehetra amin’ny fifamoivoizan’ny fiarakodia sy ny mpandeha an-tongotra. Toy izany koa ny fanohintohinana ny filaminam-bahoaka amin’ny endriny rehetra. Rehefa
ANDRAIKITRA SY ANJARA ASAN’NY SAMVA Tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanadiovana sy ny fanajariana (Assainissement) ny tanànan’Antananarivo ny SAMVA ka noho izany dia andraikiny ny mikojakoja ireo fitaovana sy fotodrafitr’asa mikasika ny fanadiovana. Ireo anjara asan’ny